मस्ती लुट्नेः लघुकथा - Lekhapadhi.com साहित्य/कला : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:१० मा प्रकाशित
“तपाईलाई सबैले आन्दोलनको इमान्दार योद्धा भन्छन् र त्यागी पनि ! तर तपाई हामी जस्तो मन्त्री बन्न सक्नु भएन ।”
म, सीमा बहिनी, र खेम राजनीतिमा लागेको कति भोर लगभग आठ नौ वर्ष त भो, हामी मन्त्री सबै भइसक्यौं । त्यस्तै हामीसंगै राजनीतिमा लागेका चार जना सांसद भई सके । तपाई त जाबो सांसद बन्न पनि सक्नु भएन । अरू के कुरा गर्नु तपाईसंग !” गोकर्णलाई नाताले नाति पर्ने धिरजले भने ।
धिरजको कुरा सुनेर गोकर्णले शान्तस्वरमा केहि भन्दै गर्दा तपाई बिरामी हुनुहुन्छ । चुप लाग्नु होस् म उहाँलाई पहिला केहि कुरा भन्छु भन्दै उमेरले त्रिहत्तर वर्ष कटेका भगीरथ बाजेले भन्नथाले “तपाईहरू भ्रष्ट केही नेताहरूको चाकडी र इमान्दार विरूद्ध चुक्ली र भ्रष्टसंग दलाली गरेर पैसा कमाउने केही भ्रष्ट नेतालाई दिने र आफू पनि कमाउनेतिर लाग्नु भएको छ । आफूले पद र सुविधा पाउनु नै राजनीति गर्नु हो भन्ने ठान्नु भएको छ । देश र जनता प्रतिको कर्तब्य भन्दा केहि नेताहरू र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तिर लाग्नु भएको छ । इमान्दारको तेजोबध गर्न लाग्नु भएको छ । त्यसै अनुसार चल्नु भएको छ । जननीति भन्दा झुट नीतिमा लाग्नु भएको छ । झुट, लुट र मोजमा लाग्नु भएको छ ।
तपाईहरूको गराई र भनाईहरूले हाम्रा देशका युवाहरूलाई देश र जनताप्रति इमान्दार र त्यागी बन्नु बनाउनु भन्दा स्वार्थी र अपराधी बन्ने बाटोमा लगाउने काम भइरहेको छ । तपाईजस्ता युवाहरू जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु भन्दा आफ्नो मोजका लागि जनतालाई थिचो मिचो गर्न जनविरोधी काम तिर लागेर आउने युवाहरूको पुस्तौ पुस्तालाई दिशा हिन र बरबादीको बाटोतिर घचेट्तै हुनुहुन्छ ।
तर तपाईका हजुर बा गोकर्णहरू युवाअवस्था देखि अहिले सम्म लगातार सबै किमिसको अन्याय अत्याचार दमन पक्षपातको विरूद्धको आन्दोलनमा लागि रहनु भएको छ । जेलनेल र सबै प्रकारका निरंकुश दमन सबै अप्ठ्यारा पार गरेर बलिदानी संघर्ष गरेर यो परिवर्तन उहाँहरूले ल्याउनु भएको हो । जनतालाई कसरी सुख शान्ति हुन्छ भनेर अहिले पनि त्यसैमा लागिरहनु भएको छ । उहाँहरू तपाईहरू जस्तै गरी हिजो पद पाउन, सुविधा पाउन चाकडी, चुक्ली च्यापलुसीमा लाग्नु भएको भए निरंकुशता पराजित हुने थिएन । यो परिवर्तन पनि हुने थिएन । तपाईहरूका नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनै सक्दैनथ्ये । मोजमज्जा गर्नै पाउँदैनथ्ये । सडक र गल्लीमा घुम्न बाध्य हुन्थ्ये । गोकर्णहरू जस्तै धेरै इमान्दार र त्यागीहरूको योगदानले ब्यवस्था परिवर्तन भएको हो ।
तर अहिले केहि अपराधी नेताहरूले उहाँहरू जस्तालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहेका छन् । तपाईहरू जस्ता युवाहरूलाई देश र जनताको हितमा लगाउनुको सट्टा पद, पैसा सुविधा पाउन चाकडी चुक्ली जालझेल षडयन्त्र गर्ने गराउने शिक्षा दीक्षा दिइएको कुरा त तपाईहरूको भनाई र गराईबाटै थाहा भयो । तपाईहरूलाई जुनबाटो हिड्न लगाईएको छ यो देश र जनतालाई बरबादीको गर्ने बाटो हो !”
“लोकहित गर्नेले निजी स्वार्थ त्याग्छ । तर केहि नेताहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि गोकर्ण जस्ता धेरै त्यागी र ईमान्दारहरूलाई अपमान गरेका छन् । विचौलिया र भ्रष्टसंग कमिसन लिन्छन र जनता महँगीको मारमा पारेका छन् । जनताप्रति गद्दारी गरेका छन् ! इमान्दारिताको अन्त हुँदा के हामी सबैको अस्तित्व रहन्छ होला र ?
एक पटक गम्भीर भएर सोच्नु होस् त धिरज बाबुहरू तपाईंहरूले !” कविताले भनिन । “ठग जाली झेली जति चम्कियो त्यति देश र जनतालाई हानी हुन्छ । इमान्दार र त्यागीले हड्डी घोटेर परिवर्तन ल्याएको तर केही भ्रष्ट नेता र तिनका दलालहरूले मस्ति मारेको सबैले देखिरहेका छन् । यो राम्रो भयो त धिरज बाबु !” स्वस्तिकाले भनिन् !
“कुरा त यस्तो पो रहेछ! “यस्तो कुरा त हाम्रा नेताहरूले हामीलाई केहिल्यै भन्दैनन् ! पद , प्रतिष्ठा र पैसाको मात्र कुरा गर्छन!” धिरज र उनका साथीहरूले एकै स्वरमा भने ।
अनामनगर , काठमाडौं
प्रेम कहानी(एउटा अलग प्रेम कथा) :- भाग १